सदाबहार नायिका भन्छिन्: मलाई दर्शकले दिएको मायामा सात पुस्ता रमाउनेछन् ! - Bulbul Samachar
सदाबहार नायिका भन्छिन्: मलाई दर्शकले दिएको मायामा सात पुस्ता रमाउनेछन् !
bulbul मंगलबार, असार ८ गते 189 views
सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर आजभोली सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । देशको सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा उनी तर्कसहित आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरिरहेकी हुन्छिन् । कतिले उनका भनाईमा समर्थन जनाउने गरेका छन् भने कतिले आलोचनामा शब्द खर्चिने गरेका छन् । तर, ताली होस् वा गाली, उनी आफ्नो भनाई राख्न कहिल्यै डराउँदिनन् ।
उनले दुई दिन अगाडि फेसबुकमा चुनावबाट चुनेर गएका प्रतिनिधिले जनताका समस्या हल गर्न के गर्दा रहेछन् त्यो हेरौं भनेकी थिइन् । जसमा धेरैले उनलाई फेसबुकमा गफ मात्र दिएर नबस्न चुनौती दिएका छन् । त्यस्तै, आइतवार उनले ‘से नो टु काबर्न’ लेख्दै सोडायुक्त पेय पदार्थ नपिउन अनुरोध गरिन् । यसमा पनि करिश्माले रोनाल्डोको लय समातेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
उनले मनमा लागेको कुरा लेख्दा आफूले धेरै कमेन्ट भोग्नु परेको गुनासो पोखेकी छन् । आफूले समय अनुरुप भइरहेको कुरा नै भन्ने गरेको बताउँदै उनी फेसबुकमा लेख्छिन्, ‘न मेरो कोही निकट छ, न कोही टाढा । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नु नागरिकको अभिभारा हो । यो जीवनकालमा जुन राजनीतिक अपरिपक्वता देखेँ, त्यसले गर्दा यो बोले होला । किनभने मुटु पोल्छ ।’
करिश्माले आफूलाई दर्शकले दिएको मायामा सात पुस्ता रमाउने पनि बताएकी छन् । उनी श्रीमानको बारेमा अगाडि लेख्छिन्, ‘विनोद मानन्धरको त के कुरा गरुँ, त्यो हजुरहरुले दिएको मायालाई साकार रुप दिएर सबैभन्दा अभिभावक भएर निभाउनु भएको छ ।’ आइतवार उनले सिन्धुपाल्चोकका बाढी-पहिरो पीडितलाई छानोको व्यवस्था गर्न एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेकी छन् ।
मलाई दर्शकले दिएको मायामा सात पुस्ता रमाउनेछन् !
पदमुक्त मन्त्री बालुवाटारमा !
एक सातादेखि अवरुद्ध बेनी- जोमसोम सडक खुल्यो !